Ny mpiara-miasa aminay - Easy Multi Display - Ny lozisialy nomerika nomerika tsara indrindra
Fantaro bebe kokoa momba ireo mpiara-miasa aminay
Vitrine Multimedia - Fampivoahana nomerika vita amin'ny Digital
Ity rindrambaiko miorina amin'ny french ity dia vahaolana fampisehoana nomerika mahomby sy malaza ampiasain'ny mpanjifan'ny haavon'ny orinasa manerana an'i Eropa. Raha ny tena izy, dia be mpitia, satria namorona sy nanorina ny aingam-panahy - ary nieritreritra ny tontolo iray izay nahitana vahaolana mitovy amin'izany mba hamenoana ny filàn'ny mpanjifa kely kokoa amin'ny fepetra takiana tsotra kokoa. Toy izany no nahaterahan'ny Easy Multi Show.
Na dia Easy Easy Show aza no vahaolana lehibe ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany, raha toa ka mpanjifan'ny orinasa ianao ary manana fepetra sarotra na mila zavatra kely fanampiny, na fanitsiana fampisehoana lehibe kokoa izany na fikarakarana tokana tokana. Ny Vitrine Multimedia dia hamorona vahaolana ilaina ho anao.
Tsidiho ny Multiplayer Vitrine
Cockpit Virtual - Manam-pahaizana momba ny angona angona sy raharaham-barotra
Sampandraharaha momba ny consultant
Maro ireo mpanjifa izay mitady vahaolana fampisehoana nomerika no mikasa ny hanangana rindrin'ny efijery toy ny efitrano ady na trano akoho - mba hijery sy hitantana ny orinasany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny sain'ny data.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'i Virtual Cockpit dia afaka manome sanda bebe kokoa amin'ny mpanjifanay mitady lozisialy fandraharahana, data analytics na serivisy fitantanana data. Atsaharo ny fikatsahanao, eto ny tranon-jaza Virtual.
Tsidiho ny Kokolahy Virtual
Manoloana. Mivoatra. hanome hery
Ny fahazoana ny fampiratiana ny varotra dia dingana iray amin'ny famoronana orinasa iray mahomby, dingana lehibe iray hafa ny fampivoarana ny olonao. Modo Coaching & Training dia fikambanana iray miara-miasa amin'ny mpitondra sy ny mpitantana mba hampivelatra ny fitarihana mahomby sy hanatsara ny dinamika sy ny fifandraisana amin'ny ekipa.
Araraoty ny tavany Modo mifanatrika na serivisy amin'ny fampiofanana amin'ny Internet sy ny serivisy amin'ny fampiofanana mba hampivelatra ny faharanitan-tsaina ao amin'ny ekipanao ary omena hery ireo mpitarikao hiditra ao anatin'ny tena mahomby.
Aza adino ny mitsidika ny "momba anay" faritra.